Fihetseham-po amin'ny vanin-taona mafana miolakolaka mitia amin'ny lohany mavo iray womens milomano palitao |
Mampihena ny vavony
Swimsuit misy aingam-panahy avy amin'ny Vintage ~ Manify sy manalefaka ny kibo sy ny valahana; ~ Mampiseho fiolahana fa tsy hoditra.
Asehoy ny fiolahana
Akanjo fandroana iray ~ Allover shirring manaloka maso sy miafina; ~ Misintona eo; tsy misy fanidiana.
akanjo baoty iray miaraka amina endrika mamy indrindra eo amoron-dranomasina, miaraka amin'ny teknolojia fanaraha-maso mandroso, padding malefaka ary alokaloka vita amin'ny allover izay mandingana ny curve rehetra. Ity akanjo fandroana iray ity dia manampy paingotra amin'ny fitafianao. Safidy sy famolavolana am-pitandremana dia hahatonga anao hahazo aina, amin'ny kanto sy kanto.
--Ny tadiny spaghetti azo ovaina, azonao atao ny manamboatra ny halavan'ny tadiny tsara kokoa ho anao.
Tie Knot manala akanjo ba Tie Knot manala akanjo ba Tie Knot Front Bikini Set Tie Knot Front Bikini Set Swimsuit roa vita amin'ny V-wired Swimsuit roa vita amin'ny V-wired
Style Singa iray Singa iray Roa Piece Roa Piece Roa Piece Roa Piece
vozony V vozona V vozona V vozona V vozona V vozona V vozona
endri-javatra Manapaka Manapaka Fatotra fatotra Fatotra fatotra V-Wired V-Wired
Fampitandremana momba ny hafanana
1. Azafady mba jereo tsara ny antsipirian'ny habe alohan'ny ividiananao.
2. Azafady mba avelao ny fahasamihafana habe 2-3cm noho ny fandrefesana ny tanana.
3. Raha manana vatana ambony lava kokoa ianao dia ampirisihinay hiakatra ny habeny (Rehefa mividy akanjo ba iray ianao.)
4. Ny lokon'ny zavatra mihetsika dia mety miovaova kely amin'ny sary noho ny fanaraha-maso isan-karazany.
5. Azafady mba diniho tsara fa ny pirinty dia kisendrasendra, noho izany dia tsy manam-paharoa ny palitao rehetra.
6. Tsara kokoa ny manasa moramora ireo entana amin'ny rano mangatsiaka ary mihantona maina, aza mavesaoka sy vy ambany.
Previous: Malalaka avo voapaika tongotra Cheeky seza fandrakofana akanjo iray fandroana akanjo ho an'ny vehivavy
Manaraka: Taratasy fanaovana akanjo tanora miady amin'ny bakteria isan-karazany
Miorina amin'ny tontolo iainana malefaka mamono ny spandex Seam ...
Multi habe ahazoana aina milay marevaka marevaka ...
Fanatanjahan-tena / Fitness iray habe mifanaraka amin'ny Super Stretch L ...
Custom Colour Anti Static Soft Cotton Breathable ...